Haweenka maxaa dhaxalka loogu dulmiyay? – Kaasho Maanka
Dulmiga iyo gabood falka diinta islaamku ku hayso haweenka maaha wax lasoo koobi karo balse waxaa wax lala yaabo ah waxyaabaha ay qiilka uga dhigaan dulmigaas.
Marka laga hadlayo dhaxalka iyo sida loo qaybsanayo waxaa jira xeer guud oo odhanaya wiilku wuxuu qaadanayaa laba gabdhood waxay qaataan. Marka la waydiiyo waxaa loo simi wayay xaqqa ay wiilka iyo gabadhu ka heleyaan hantidii waalidkood uga dhintay, waxaa diyaar u ah jawaab odhanaysa “Gabadha wax waajib ahi ma saarna oo iyadaa la quudinayaa, la guursaneyaa, meherna laga bixinayaa“.
Ninku inuu badi qaato dhaxalka waxay sabab uga dhigeen in isaga meher laga sugayo iyo inuu quudiyo reerkiisa, inaad reerkaaga quudisaa miyaanay ahayn waajib ku saaran ninow? Gabadhase miyaan waajib ka saarnayn inay quudiso ubadakay dhashay? Isagu hadduu aabbe yahay waajib saaran yahay iyadaba miyaanay ahayn hooyo waajib saaran yahay?
Dulmiga haweenka lagu hayo hubka loo adeegsado waxaa ka mid ah meherka oo raggu aaminsan yihiin inay haweenka iibsadeen maadaama ay hanti kala bexeen. Gabadhu ma codsan iyadu in meher laga bixiyo si ay xaqqeeda u waydo mana jecla raallina kama aha inay guriga fadhido oo aanay wax baran ama shaqo tegin balse waa lagu qasbay inay guriga fadhido, markay yaraydna waxbarashada ayaa laga ilaaliyey si ay jaahilnimo ugu waynaato uguna jilicsanaato dulmiga. Waxaa jirta cabsi ah haddii ay waxbarato inay ka hoos bixi karto gumaysiga ninka, gabadhu haddii ay aqoon yeelato kadibna shaqaysato uma baahna nin ku waabsada inuu quudiyo ama hanti(meher) ka bixiyey kadibna dulmiya. Raggu iyagoo adeegsaneya xeer diimeed ay qorteen ayay haweenka dullaysteen waxase nasiib darro ah in haweenku ku qancaan raallina ka yihiin welibana difaacaan nidaam iyo sharci iyaga xaqooda duudsiinaya.
Baahiyaha saw looma sinna? Qof waliba rag iyo haween saw uma baahna hanti uu noloshiisa ku maareeyo? Maxaa keenay inay diintu ninka masuuliyaddiisa dhaqaale u madax bannayso una fududayso dumarkana ay ninka hoos geyso gabal yarna xaqoodii ka siiso?
Masuuliyad markay noqoto yaa hooyada ka masuuliyad badan? Gabadhu waa hooyadii berri caloosheeda sagaal bilood ku qaadi lahayd noole. Korinta iyo dhaqaalaynta ilmaha ma masuuliyad iyo hawl ka culus baa jirta? Haddii ninku siddeed saacadood soo shaqeeyo saw ma wada ogin hooyadu maalin iyo habeen oo dhan inay ilmeheeda dul taagan tahay iyadoo aan nasasho iyo fasax midna qaadan? Ma gar baa in la yidhaahdo masuuliyad ma qaadi karto?
Waxaa ayaan darro ah in gabadha xaqeeda lagu duudsiyo iyadoo la leeyahay haweeney baad tahay oo marka nin ku guursado ayuu lacag ku siin doona, sidaa darteed hantidii aabahaa waxba kuma lihid. Waxaa is waydiin mudan haddii meherku yahay xaq gabadhu leedahay ma gar baa inay ku waydo xaqqeedii kale ee ay ku lahayd hantidii aabeheed? Xaq ka mid ah xuquuqda qofku leeyahay laguma duudsiin karo xuquuqdaadaa badan ama haddii aad xaqqa maqalka haysatid waa in xaqqa aragga lagaa qaada.
Dhaqanka carbeed ee cadaawadda nacaybka iyo cunsuriyadda ku dhisan maaha in aan ku dhaqno haweenka Soomaaliyeed ee sharafta leh. Innagu Soomaali baynu nahay ma nihin carab mana jirto sabab aan ugu dayano oo dumarkeena u dullayno.
Waxaa hubaal ah oo qoys kastoo Soomaaliyeed ogyahay in habluhu ka wax tar badan yihiin ragga dhan walba. Ilmaha aad dhashay waalidoow yaan laguu yeedhin sidaad ugu caddaalad samayn lahayd. Wiilka iyo gabadhaba adaa dhalay mana jiraan wax kuu diideya inaad hantida aad u shaqaysay iyaga si siman ugu qaybiso, ma jirto cid ku odhan doonto maxaad caruurtaada ugu cadaalad samaysay?
Aakhiro lama hubo laakiin kol haddii aad dhimanayso hantidaadana la dhaxlayo waxaa quman inaad ubadkaaga si siman oo caddaalad ah ugu qaybisid oo aan lagugu qasbin inaad u kala eexato, Ma jirto sabab aad uga hiiliso hablaha aad dashay oo inta badan kaaga naxariis badan ragga, mana jirto sabab aad gabadhaada ugu dullayso nin ay guursan doonto oo aan la hubin jeebkiisa. Maxaa ka wanaagsan in gabadhaadu ay guursato iyadoo dhaqaale ahaan isku fulin oo aan cidna gacmaha u hoorsanayn?
Waxaan usoo jeedin lahaa waalidka Soomaaliyeed inay ubadkooda u caddaalad sameeyaan dhinac walba gaar ahaan dahxalka oo caqligooda iyo damiirkooda raacan. Ubadka idinkaa dhalay waana inay u sinnaadaan jacaylkiina, daryeelkiinna, waxbarashada iyo hantidiinna. faca soo koreya waxaan kula talin lahaa ubadka aad dhali doontaan u cadaalad sameeya haddii aydaan karayn inaad u caddaalad samaysaan ha dhalinina adduunkanna ha kusoo lug-goynina ubad aad ogthiin inay dhibane u noqon doontaan gabood falkan gaamuray, caqligiinana iyo damiirkiina hoosana ha u seeta xirina waxyaabo ku qoran buugaag dad adduun hore noolaa oo aydaan waxba wadaagin waqtigan la joogo.
Allah utoobad keeen wlo inta aanad dhiman
W/Q: Khaled Hassan 30th August 2018